Fahateraham-baovao (kristianisma) - Wikipedia
Ny fahateraham-baovao (misy koa ny manoratra hoe fahaterahana indray) dia zavatra tsapan' ny olona iray izay milaza fa niaina fiterahana ara-panahy noho ny asan' ny Fanahy Masina taorian' ny fibebahany amin' ny fahotany ka nahatonga azy hihavana indray amin' Andriamanitra. Aorian' ny fahateraham-baovaon' ny fanahiny dia atsoina hoe "zanak' Andriamanitra" io olona io. Izany fahatsapana momba ny fiovam-po izany dia singa iray lehibe ao amin' ny kristianisma evanjelika
Ny fahateraham-baovao ao amin' ny Evanjelisma[hanova | hanova ny fango]
Miaiky ny asam-panavotana nataon' i Kristy amin' ny alalan' ny fieken-keloka sady misafidy manokana ny hanolotra ny fiainany amin' i Jesoa mba hahazo ny fonomezam-pahasoavan' ny famonjena izay mifandray amin' ny fahateraham-baovao ny Kristiana evanjelika. Ny batisan' ny olon-dehibe anabatista dia matetika manambara izany fanapahan-kevitra izany.
Ny fahateraham-baovao ao amin' ny Pentekôtisma[hanova | hanova ny fango]
Araka ny finoan’ ny Pentekôtista dia hitoetra ao amin’ ny olon-drehetra voavonjy marina ny Fanahy Masina sady miasa amin’ ny alalan’ izy ireo. Ny olona avy novonjena tamin’ ny alalan’ ny fahateraham-baovao mitohy dia miova tsikelikely ka amin’ ny farany dia hiray amin’ ny Tenan' i Kristy amin’ ny alalan' ny fiombonany amin’ ny Fiangonana. Mahatonga ny Kristiana ho vaovao sy hohamarinina ny fahateraham-baovao ary manomboka amin’izay. Ny lalan’ ny famonjena (latina: ordo saluto) (dingana mankany amin’ny famonjena) dia mitarika amin' ny famonjena ny fanahy ny asa fanamasinana ataon’ ny Fanahy Masina.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fahateraham-baovao_(kristianisma)&oldid=1001497"
Voaova farany tamin'ny 18 Febroary 2021 amin'ny 05:01 ity pejy ity.